प्ले अफको एउटै समूहमा पोर्चुगल र इटाली – Khel Dainik
नेपाली टिमबाट बाहिरिए सोमपाल र बिनोद • २०औं आहा! रारा गोल्डकपमा एपिएफको विजयी शुरुवात • हारेर पनि माजिया प्रेसिडेन्ट कपको फाइनलमा • एपिएफ च्याम्पियन, आशिफ बने सर्वोत्कृष्ट • संकटाका प्रशिक्षक गुरुङले पाए नयाँ जिम्मेवारी •
प्ले अफको एउटै समूहमा पोर्चुगल र इटाली
मंसिर ११, २०७८ | (PostaComment)
काठमाडौं (एजेन्सी) । फिफा विश्वकप २०२२ को युरोपियन प्ले अफ छनौटतर्फ दुई युरोपियन महारथी पोर्चुगल र इटाली एउटै पाथ वेमा परेका छन् । जसको अर्थ यी दुई टोली मध्ये केवल एक टोलीले मात्र विश्वकपमा सहभागिता जनाउने अवसर पाउने छन् । वा दुवै टोलीले विश्वकप विही पनि हुन सक्छन् ।
पाथ सी मा रहेका पोर्चुगल र इटालीले प्ले अफ सेमिफाइनलतर्फ टर्की र उत्तरी मेसिडोनियाको सामना गर्नेछन् । जुन खेलहरु २४ मार्चका दिन हुने तय भएको छ । त्यस्तै पाथ ए को सेमिफाइनल प्ले अफमा स्कटल्याण्डले युक्रेनको सामना गर्नेछ भने वेल्सले अष्ट्रियासँग खेल्नेछ ।
पाथ बी को सेमिफाइनल प्ले अफमा भने रसियाले पोल्याण्ड तथा स्वीडेनले चेक रिपब्लिकसँग खेल्ने तय भएको छ । प्ले अफ सेमिफाइनलका सबै खेलहरु २४ मार्चका दिन हुने छन् । त्यस्तै फाइनल २९ मार्चका दिन हुते भएको छ । प्रत्येक प्ले अफ फाइनलको विजेता टोली गरि कुल ३ टोली आगामी बर्ष हुने कतार विश्वकपका लागि छनौट हुने छन् ।
← पहिलो खेलमै ब्राजीलसँग निरीह बन्यो भारत आर्सनलको जित, न्युक्यासलको संघर्ष जारी →
नेपाली टिमबाट बाहिरिए सोमपाल र बिनोद मंसिर ११, २०७८
२०औं आहा! रारा गोल्डकपमा एपिएफको विजयी शुरुवात मंसिर ११, २०७८
हारेर पनि माजिया प्रेसिडेन्ट कपको फाइनलमा मंसिर ११, २०७८
सहारा एकेडेमीलाई लुम्बिनी विकास बैंकको आर्थिक सहयोग मंसिर ११, २०७८
मधेस प्रदेशको जित मंसिर ११, २०७८
रुपन्देहीमा रेफ्री प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न मंसिर ११, २०७८